Dowlada Turkiga oo Qaadatay Go’aan Farxad galiyay Madaxtooyada Somalia – Kismaayo24 News Agency
Dowlada Turkiga oo Qaadatay Go’aan Farxad galiyay Madaxtooyada Somalia
by Mohamed Abdirashid Abaajo 3rd February 2019 057
Xog gaara ayaa sheegeysa in Dowlada Turkiga ay ku wargelisay Dowlada Federaalka Soomaaliya inay dib u bilaabeyso Lacago ay siin jirtay Villa Somalia oo Mudo hakad la galiyay.
Turkiga ayaa Cadaadis saaray Dowlada Federaalka Soomaaliya tan iyo markii ay la safatay Sacuudiga kadib Dilkii Jamal Kashoggi.
Villa Somalia ayaa lagu eedeeyay inay si aan ka fiirsi laheyn ugu dhexday Xiisada Turkiga iyo Sacuudiga maadaama Xukuumada Ankara ay ka xumaatay in Dalkeeda qof Ajnabi ah lagu dilo taasoo yareyneyso Kalsoonida lagu qabo Xasiloonida Turkiga iyo Hay’addaheeda Amniga.
Xukuumadda Ankara ayaa joojisay lacag 30-Milyan Dollarka Mareykanka oo sanad kasta ay siin jirtay Dowlada Soomaaliya, waxaana arrintaasi hore u xaqiijiyay Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdi raxmaan Ducaale Beyle.
Lacagtan ayaa aheyd Mid Dowlada Soomaaliya ay faa’iido badan ku qabtay maadaama ay kaabeysay Miisaaniyada Sanadka ee Dowlada, waxaana jira Codsi ay Somalia u gudbisay Turkiga oo ah inaysan lacagtaasi hakad galin walow jawaabta laga soo daahiyay hadana Madaxtooyada Soomaaliya waxaa farxad galiyay Go’aanka ay hada qaadatay Dowlada Turkiga.
Sadex arrin ayaa Farmaajo ka dhaadhicisay inuu ka maarmo reer-galbeedka
Dhageyso:Kooxda Ahlu-suna oo ka hadashey is-hortaaga looga sameeyay Xaflada Dhuusomareeb uga dhaceysay.
Siyaasiga Hilowle Adan oo arimo badan oo xasaasi ah ka hadlay..
Qaar la mid ah Hobolaadii waabari oo hees ka sameyay Xasuuqa kenya ay ka wado Gedo